Barwaaqo's Content - Somali Forum - Somalia Online
Everything posted by Barwaaqo
Barwaaqo replied to Saalax's topic in Politics
Oodweyne; Gacal ku arag, Cadowna argagax. Salaan qiimo badan Halyeey. Inaadeer cudurka haya kaarkiisa/xummadiisa waxay ku jebiyaan Somaliland iyo dadkeedda . Kiniinkii koodhiinka la odhan jiray baan u noqonay.
Mashiiinkii cadawga Muqdisho ayaa shaqaynaya! Yaan fanaan lagu meeraysan oo lagu qarin dhiiga reer Muqdisho.
Moqdhshoow I maqal: Cudurka kaa gala fadhaha Hadii laga gubo dameer dawadda lama gaadhayo’ waa maahmaah Somaliyeed. Dawadda kama helaysaan BK hadal hayntiisa iyo hadal uu yidhi. Dawadda saxda ahi waa idinkoo ka raadiya dhexdiinna. Moqdishoow gumaadka la idinku hayo yaan lagu qarin ama la idinku maaweelim fanaan baa hadal yidhi. Moqdishoow maaweeladda caruurta yaan laydinKu seexin. Moqdishooy, reer Somaliland waa Soomaali muslin ah oo idiin damqanaya, nacayb idiinma hayno.. Moqdishooy Madaxdii qarankayaga ayaa ka jawaabtay dareenkii shacabkayaga oo tacsida idiin soo dirtay. . Moqdishoow halka dawadiinnu ku jirto raadiya si aad u caafimaadaan.
On 29 Jun 1960, newly Independent state of Somaliland cuts ties with South Africa cites Apartheid system.
Barwaaqo replied to Suldaanka's topic in Politics
Markaan da’da jiray sadex casho/beri ; Markaan Damac dawlad la soo kacay; Dookhaygu dabadeed xumaaday .
Somaliland region police station attacked in Borama, Awdal
Agoontii qoladii halgantay, soowtan hooyooyinka Somaliyeed ee xalaal quudatadda ah, ee sida xoriyadda ah dhulkoodda ugu ganacsaya aflagaadeeyey! Markay awood ay Somaliland wax ku yeelayn waayeen taladoodii noqotay aflagaado .
Nin weyn oo inan yar huruufaya! Eedo, sakiin liq inaad ku tidhaah bay ahayd.
Talaabo, Shimbirtii u wayneyd ayaa Berbera ka soo degtay saaka subaxii Dawlada Imaaradka Carabta Oo Qaaday Talaabo Ay Kaga Jawaabayso Warar Been Abuura Oo Warbaahinta Caalamku Kaga Faalootay Saldhiga Meletery Ee Dawlada Imaaradka Carabtu Ka Dhisanayso Magaalada Berbera(Sawiro) BURCOONLINE.COM (BurcoOnline.com)Madaarka Diyaaradaha Ee Magaalada Berbera Waxaa Kasoo Degtay Diyaarad Khaasa Oo Laga Leeyahay Wadanka Imaaraadka Carabta,
Barwaaqo replied to Xaaji Xunjuf's topic in Politics
Barwaaqo replied to Che -Guevara's topic in Politics
Maahmaah ‘ama afeef hore lahaw ama adkeysi dambe lahaw’
Intii Jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland jirtay waa markii u horeysey ee Sucuudigu si wanaagsan u qaabilo Madax ka socota Somaliland amaba jaaliyadda Somaliland ee Sucuudigu ay ula kulmaan Madaxweynahoodda. Warancade oo arintan ka waramaya ka dhugo clipkan
Wasiirka Arimaha dibadda Somaliya oo aan xidhiidhka u jari karin Sucuudiga ayaa salaan ugu tegay Madaxweynaha Jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland Xaaji Muuse Biixi
Innaa Lilaahi wa innaa ilaahi raajucuun Samir iyo iimaan dhamaan caruurtiisii , ehelkiisii Iyo dhamaan Ummadda Soomaaliyeed
‘Calaa geelii ba’ay’ , maahmaahdani waxay ku timi; Oday qurbo jooga ah baa reer Dan yar geel u dhiibtay , isagoo shuruud kula galay inay manaafacadsadaan , maalintuu u baahdanna uu Geeliisa la wareegayo. Geelaa waxa raaci jiray oo dhaqaalayn jiray wiil Cali la yidhaah oo ku garaadsaday isagoo geelaa reerkoodu leeyahay. Hadaba maalintii geelii uu la wareegay xaqlihii , Cali wuu murardilaacay oo u qaadan waayey. Sidaasaay maahmaahdu ku baxday . U badi inay reer Burco ahaayeen. Hada Saalax muxuu shaqo ka dhigan?
Barwaaqo replied to maakhiri1's topic in Politics